Yangu iPhone maapplication haivhure! Heino mhinduro yekupedzisira. - Zvimwe
itunes haina kuona iphone
Nei yangu Android ichiramba ichibatanidza kubva pawifi
handigoni kutumira pics pa iphone
Kana iwe ukabaya kuvhura iyo iPhone app, chimwe chezvinhu zviviri zvinoitika: hapana chinoitika, kana iyo app kutakura iyo yekuvhura skrini, asi inovhara ipapo. Chero nzira, iwe unotarisa kune iPhone izere nemaapplication ayo asingavhure, uye izvo hazvina kunaka. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kwauri nei maapplication ako e iPhone asingavhure Y kugadzirisa dambudziko racho .
Sei yangu maapplication e iPhone asingavhure?
Yako iPhone maapplication haizovhure nekuti yako iPhone ine dambudziko re software. Kana imwe app ikapunzika, kazhinji haina kukonzeresa iyo iPhone yese kupunzika. Panzvimbo iyoyo, iwe unozopedzisira wadzokera pachiratidziro chekumba uye iyo app inoguma kumashure. Kazhinji yenguva, izvo zvakakwana kugadzirisa software bug, asi kwete nguva dzose.
Zvirongwa hazvipo mune yekugezesa futi. Mune ruzivo rwangu, iPhone maapplication kazhinji haazovhurike nekuda kwedambudziko neiyo iPhone inoshanda sisitimu (iOS), kwete dambudziko neapp pachayo.
Maitiro ekugadzirisa iPhone maapplication ayo asingavhure
Ini ndinokufambisa kuburikidza nedanho rekugadzirisa dambudziko app risingavhure nhanho nhanho. Tichatanga zvakapusa toshanda nzira yedu kune mhinduro dzakaomarara, pese pazvinenge zvichidikanwa. Unogona kuzviita. Ngatitangei!
1. Dzorera yako iPhone kure uye on zvakare
Zviri nyore, asi kudzima yako iPhone kure uye kumashure kunogona kugadzirisa zvakavanzika software matambudziko anogona kudzivirira ako maapplication kuvhura mushe. Paunodzima yako iPhone, iyo inoshanda sisitimu inodzima ese madiki epashure mapurogiramu anobatsira yako iPhone kumhanya. Paunodzosera kumashure, ese anotanga pamusoro, uye dzimwe nguva zvakaringana kugadzirisa software kutadzisa maapplication ako kuvhura.
ipad yangu haizotenderi
Kudzima yako iPhone, tinya uye bata bhatani remagetsi pane yako iPhone kudzamara 'slide yemagetsi kudzima' ichioneka pachiratidziri. Slide iyo icon pane iyo skrini nemunwe wako uye mirira kuti yako iPhone idzime. Zvakajairika kuti maitiro acho atore kusvika pamasekondi makumi matatu. Kudzorera yako iPhone kumashure, pinda uye bata bhatani remagetsi kudzamara Apple logo yaonekwa pachiratidziro, wozoiburitsa.
2. Tarisa ongororo muApp Store
Chimwe chezvikonzero zvikonzero vashanduri vekunyorera vanoburitsa inogadziridza ndeyekugadzirisa software bugs dzinogona kukonzera matambudziko seizvi. Panzvimbo pekuenda kuburikidza nerondedzero kuti uwane iro dambudziko app, ndinofunga sarudzo yako yakanaka ndeye kungo gadziridza ako ese maapplication panguva imwe chete.
Kuti uvandudze zvaunoshandisa, vhura iyo App Store uye tora pane yako Akaundi icon mukona yepamusoro yekurudyi yekona. Bhura pasi pasi kune iyo Ongororo chikamu uye tora Gadziridza zvese kugadzirisa zvese zvinoshandiswa panguva imwe chete.
3. Delete iyo application uye kuisazve iyo
Pfungwa yekuti unofanira kubvisa Anwendung kubva iPhone wako uye kukopa zvakare kubva App Store ndicho chinhu chokutanga zvikuru wevanamakanika vachakuudza kuita. Ndicho 'chisvinure, chivhara zvakare mu' chikoro chekufunga, uye kazhinji chinoshanda.
Ini ndinofunga inzvimbo yakanaka kutanga, asi ini handidi kuti iwe uwane tariro dzako kumusoro. Zvibvunze kuti: 'Dambudziko nderese maapplication angu here kana kuti idambudziko nechisungo chimwe chete?'
Ehe imwe chete Yemaapps ako haavhure, pane mukana wakanaka wekuti kubvisa Anwendung kubva ku iPhone yako uye kuisazve kubva kuApp Store ichagadzirisa dambudziko.
Ehe zvakawanda Zvekushandisa kwako hazvivhure, ini handikurudzire kuti ubvise uye udzorezve, nekuti pamwe kutambisa nguva. Panzvimbo iyoyo, isu tichafanirwa kugadzirisa chiri kukonzera chikonzero, inova iyo iPhone inoshanda system (iOS).
4. Iko kunyorera kwekare here? Yakapedzisira riini kuvandudzwa?
Iko kune anopfuura mamirioni 1.5 maapplication paApp Store, uye haazi ese ayo anochengetwa kusvika pari zvino. Iyo software kodhi inomhanya neApple application inoshanduka nguva dzese apo Apple inoburitsa vhezheni itsva yeIOS. Shanduko kazhinji hadzisi dzakanyanya, asi kana app isina kuvandudzwa mumakore, zvingangove zvisingaenderane neyako vhezheni yeIOS.
Kana iwe uchangobva kuvandudza yako iPhone kune itsva vhezheni yeIOS, kunyanya kana yaive hombe kuvandudza, sekubva kuIOS 13 kuenda kuIOS 14 (kwete kubva pa14.2 kusvika pa14.2.1, semuenzaniso), izvi zvinogona kutsanangura kuti nei app yako yakunda ' kuvhura.
icloud backup isiri kushanda pane iphone 5
Kuti uzive kuti riini app rakapedzisira kuvandudzwa, vhura iyo App Store pane yako iPhone. Tsvaga Anwendung uye vawane Record shanduro kuti uone apo iyo shanduro yekushandisa yakagadziridzwa.
Imwe nzira yekuyedza izvi kubvunza shamwari ine imwecheteyo iPhone uye iOS vhezheni kuti utore uye uvhure iyo app. Kana iyo Anwendung achishanda pane yako iPhone, tinoziva kune software software neako. Kana iyo app ikasavhura pane yako iPhone, pane dambudziko neiyo app.
iphone yakanamatira paapuro logo chiuno
Zvinosuruvarisa, kana purogiramu yakanyanya kudhara kuti ishande pane nyowani vhezheni yeIOS, hapana chaungaite kuti iite kuti ishande. Bheji rako rakanakisa nderekubata mushambadzi weapp uye ubvunze kana vari kuronga kuburitsa vhezheni yakagadziridzwa. Dai ini ndaive mune yako (yekuvandudza) chinzvimbo, ini ndaizotenda kana mumwe munhu akandizivisa nezvedambudziko iri.
5. Dzorera zvese marongero
Iwe uchawana Hola on Zvirongwa> Zvimwe> Gadzirisazve , uye hachisi chinhu chandinokurudzira kuita kunze kwekunge zvakakodzera. Kugadzirisazve magadzirirwo hakubvise chero rako data kubva kune yako iPhone, asi sezita zvarinoreva, rinogadzirisazve zvese marongero kuzvinhu zvakashata zvefekitori. Kana iwe wakatora nguva ku gadziridza marongero ekuvandudza hupenyu hwebhatiri , semuenzaniso, iwe uchafanirwa kuzviita zvakare.
Ini handifunge kuti kune mashiripiti bara rezvinetso zve iPhone, asi kana ini ndaifanira kusarudza, Reset Zvirongwa ndicho chinhu chepedyo kwazviri. Izvo zvakakodzera kuyedza: ini ndaona maKugadzirisazve Zvimiro kunogadzirisa zvisina kujairika software matambudziko, uye haina kuomarara sedanho rinotevera mukuita, iro riri kutsigira uye kudzorera yako iPhone.
6. Ita backup ye iPhone yako uye udzore iyo
Kana iwe waedza Kugadzirisazve ako marongero e iPhone, kubviswa uye kumisikidza iyo app, uye iwe unogutsikana kuti iyo app haina kunyanyokura zvekumhanyisa pane yako vhezheni yeIOS, inguva yekurova rinorema kusimudza giya. Tichaita backup ye iPhone yako muICloud, kana Finder, iTunes, uyezve wozodzorera yako iPhone uchishandisa iTunes kana Finder, uye isu tinopedzisira tadzorera yako yega data kubva kune yako backup.
Usati watsigira yako iPhone, ini ndinokurudzira izvo uninstall Anwendung kukonzera dambudziko kubva iPhone wako ( Ehe ingori app isingavhure). Kana iri inopfuura imwechete app, usanetseke nezvekubvisa zvese, ingoita backup uye uteedzere maitiro.
Iyo yakanaka nzira yekuita izvi ndeyekuchengetedza yako iPhone kuICloud (kana iwe usina nzvimbo, chinyorwa changu pane nei usingatombofaniri kubhadhara iCloud yekuchengetedza ichakubatsira kuburitsa chimwe chinhu), ita DFU kudzoreredza yako iPhone uchishandisa iTunes kana Finder uye kudzorera yako data kubva kune yako iCloud backup.
Shandisa iCloud kuchengetedza yako iPhone, kana uchikwanisa
Ndinokurudzira kushandisa iCloud kuchengetedza uye kudzorera yako iPhone apo maapplication ako asingavhure.
Paunotsigira yako iPhone mu iTunes kana Tsvaga, iwe unogadzira kopi yeese ako maapplication uye data. Paunodzoreredza kubva kune iyo backup, yese iyo faira inoiswa kumashure pane yako iPhone, uye pane mukana wekuti dambudziko richaonekwa zvakare.
ICloud backups chete chengetedza yako yega data 'mugore', kwete iyo yese application. Paunodzorera kubva kuICloud backup, yako iPhone inotora yako yega data kubva kuICloud uye maapplication ako kubva kuApp Store, saka pane mukana mushoma wedambudziko kudzoka.
iphone 5c imessage isiri kushanda
Zvikumbiro zvinovhurwa zvakare! Kuvhara…
Kana iyo iPhone app ikasavhura, idambudziko rinogona kutora masekondi makumi matatu, maminetsi makumi matatu, kana zvimwe kugadzirisa. Nekuda kwako, ndinovimba mhinduro iri nyore. Ndinoda kunzwa nezve chiitiko chako nemaapps asingavhure, uye kuti waifanira kuenda kure zvakadii kugadzirisa yako iPhone.
Kutenda nekuverenga, uye yeuka kudzorera nyasha,